राजनितीमा आस्था र निष्ठा जरुरी छ ः नरेश शंकर पालिखे – BIG FM 101.2 MHz
Home » Featured » राजनितीमा आस्था र निष्ठा जरुरी छ ः नरेश शंकर पालिखे
राजनितीमा आस्था र निष्ठा जरुरी छ ः नरेश शंकर पालिखे
नेपालमा राजनिती के का लागि गर्ने भन्ने बिषयको उत्तर नै पाउन नसकीरहेको बेला आसन्न र्निबाचनमा प्रदेश सदस्य का लागि कास्की र्निबाचन क्षेत्र नंम्वर २ अन्र्तगत प्रदेश २ का स्वतन्त्र उमेदवारी दिएका नरेश पालिखेले एक शब्दमा भने ,निष्ठा र गलत प्रबृत्तिको बिरुद्धमा लड्न । गलत प्रबृत्ति पार्टी भित्र पनि हुन्छ र बाहिरी समाजमा पनि , उनले थपे ।
बालक चिन्ह लिएर मैदानमा उत्रेका पालिखे आफुले चुनाव जित्ने प्रशस्त आधार पेश गर्छन । नेपाली काग्रेस कास्कीमा जवरदस्त छबि बनाएका काग्रेसका नेता नरेश पालिखेले कास्की काग्रेसको नेतृत्व तहमै बसेर लामो समय काम गरेका छन । २०२० सालमा जन्मेका पालिखे मास्र्टस ईन बिजनेश एडमिनिष्ट्रेसन बिषयमा नेपाल उत्कृष्ट भई गोल्ड मेडल पनि पाएका छन । २०५७ सालमा उनि काग्रेस कास्कीको सचिव हुदै तत्कालिन उममहानगर अध्यक्ष, महासमिति सदस्य भएका छन । तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिका पुर्ब उप–मेयर पािलखेले प्रतिगमन बिरुद्धका आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाएका थिए । उनलाई २०६१ सालमा ७० दिन सरकारले नजरबन्दमा पनि राखेको थियो । राजाको प्रत्यक्ष सासनका बिरुद्धमा पालिखेले आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाएका हुन ।
काठमान्डौको साद्यसस्थानमा खसिवोका राख्ने ठाऊमा उनलाई हिरासतमा राखिएको थियो । बौद्धिक क्षमता भएको नेताको रुपमा मानिने पालिखेलाई काग्रेसले प्रशिक्षण बिभागको सदस्य पनि बनाएको थियो । पालिखे बिजनेश युनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैकको अध्यक्ष , पृथ्वीनारायण क्याम्पसका सहायक पाध्यापक, फेवा प्रिन्स होटलको प्रबन्ध र्निदेशक समेत भैसकेका छन । उनै पालिखे संग गरिएको बिषेश कुराकानी ः
१) प्रश्न ः तपाईको स्वतन्त्र उमेदवारी कीन ?
— पहिलो कुरा म एउटा लामो समय राजनितमा बिताएको मान्छे हो । राजनिती भनेको परिबर्तनको लागि हुन पर्छ भन्ने मान्यताका साथ म राजनितमा होमिएको थिए । समाजमा भएको नकारात्मक कुरालाई केवल राजनितिले मात्र फेर्ने सक्छ भन्ने लागेर नै राजनतिमा लागेको हो । तर पछिल्लो समय राजनितलाई मागि खाने भाँडो र फेसनको रुपमा प्रयोग हुन थाले पछि मैले स्वतन्त्र रुपमा उमेदवारी दिएको हो । बालक चिन्ह लिएर चुनावमा हामिएको छु । दोस्रो कुरा कुनै नेताको अघिपछि लागेकै कारण पैसाको खोलो बगाउने लाई टिकट दिने प्रबृत्तिको बिरुद्ध पनि मेरो उमेदावारी हो । राजनितीमा निष्ठा चाहिन्छ, त्याग चाहिन्छ , समर्पण चाहिन्छ । पार्टीमा लगानी पनि हुनु पर्छ अर्थात पार्टीमा लामो समय बिताएका लाई छोडेर राजनितिमा कुनै लगानी नभएकालाई टिकट दिने परिपाटीका बिरुद्धमा म चुनावी मैदानमा छु ।
२) प्रश्न ः नेपाली काग्रेसको राजनितमा लाग्नु भो , जनताहरुले पार्टी भन्दा स्वतन्त्र उमेदवारी दिँदा बिस्वास गर्लान त ?
बिकासमा बादको अर्थ छैन । म बिगत पनि बिभिन्न सस्थामा रहेर काम गरिसकेको छु । मेरो काम गर्न तरिका यहाँका जनतालाई थाहा छ । म घरदैलोका क्रममा धेरै मतदाताको घरमा पुगेको छु । सबैले शुभकामना र हौसला दिएका छन । नरेश पालिखे कुनै नयाँ मान्छे होईन, बिभिन्न कार्यक्रम लिएर जनताको घरमा गैरहेकै मान्छे हो । खाली बालकमा भोट हाल्दा नरेशको चिन्ह हो भन्ने जानकारी गराउन मात्र गएको हो । गोजिबाट निकालेर दिएका मानिसहरुलाई भन्दा नरेश पालिखेलाई चुनाव जित्न धेरै सजिलो छ । जनताले अत्यन्त शौहार्दपुण बाताबरणमा स्वागत गरे परिणाम मेरो पक्षमा आउछ । जवसम्म पार्टीको कुरा छ , पार्टीमा आफुहरु भन्दा कैयौ राम्रा मान्छेहरु छन, एक बर्ष अगाडी आएर पार्टीको कृयाशिल सदस्यता लिएका मानिसलाई टिकट दिँदा बर्षो देखि काग्रेसमा जिवन फालेका कार्यकर्ताहरु निरास भएका कारण गलत कुराको लागि आफुले बिद्रोह गरेको हो । पार्टीले आर्थिक प्रलोभनमा परेर जे पनि गर्न छुट नभएकाले पार्टी भन्दा माथिल्लो निकाय जनता भएकाले चुनाव बाट पार्टीका नेताहरुलाई जवाफ र कार्यकर्ता र शुभचिन्तकको मनोभावना उच्च बनाउने संकल्प छ । यदि पैसाको भरमै नेता हुने , मन्त्री र सभाषद हुने भए जिन्दगीभर पार्टीमा किन काम गर्ने ?
३) प्रश्न ः चुनाव जित्न बिकासका नारा दिएका छन सबै उमेदवारहरुले तपाईको चाँही के छ ?
मेरो र्निबाचन क्षेत्र कृषि, पर्यटन, ब्यापार जस्ता संभावनाहरु बोकेको क्षेत्र हो । यस्तो खालको बिषेशता बोकेको अन्य र्निबाचन क्षेत्र कमै हुन्छ । सबै कुराको एकिकृत योजना बनाउन सक्ने हो भने देशकै नमुना र्निबाचन क्षेत्र बनाउन सकीन्छ । मेरो संकल्प पनि त्यही छ । म नसक्ने कुरा गरेर जनतालाई अनाबस्यक आस्वासन होईन संभव हुने कुरा गरेर मात्र मत माग्ने मान्छे हुँ । मेरो र्निबाचन क्षेत्रको महानगरका ४,८,९ नम्वर वडा प्रदेश नं ४ कै मुख्य वडा हो । उपभोक्ता मैत्री र सुरक्षीत ब्यबसायका लागि ठोस कदम उठाईने छ । त्यसैगरि यो शिक्षाको पनि केन्द्र हो । यस क्षेत्रका बिद्यालयहरुको गुणस्त बृद्धि थप भौतिक पुर्वाधार मेरो प्राथमिकतामा छ । जनतालाई सहज र सरल स्वास्थ्य पहुँच, सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र तथा मेडिकल कलेजलाई जनताको सेवामा लगाउने बाताबरण पनि बनाईने छ । पर्यटन पनि पोखराको मुख्य कुरा हो , तर हाल प्रचारमा आएका भन्दा अन्य क्षेत्रहरुको पनि खोजी र प्रचार गरि थप नयाँ गन्तब्यहरु र्निमाण गर्ने मेरो लक्ष छ । पशुपालनलाई आक्रषणको पेशा बनाईने छ । दुग्ध र मासुजन्य पदार्थ र्नियात गर्नसक्ने गरि कृषिको बिकास गराउन सकिन्छ । मैले त आफु र्निबाचित भएपछि पाउने सबै भक्ता पत्रकार महासंघ र गरिव असहाय, सुकुम्वासीहरुका लागि खर्च गर्ने घोषणा पनि गरेको छु । यस्ता थुप्रै योजनाहरु म संग छन । त्यसैले बालक चिन्हमा तपाईहरुले लगाउनु भएको एक छाप नै परिबर्तनको सुरुवात हो भन्ने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
४) प्रश्न ः र्निबाचनमा तपाईका जस्तै अन्य उमेदवारहरुले बिकासका नारा लगाएकै छन, तपाईलाई कसरी बिस्वास गर्ने ?
म पदमा हुँदा पनि नहुँदा पनि निरन्तर जनता संग जोडिएर काम गरिरहेको छु । मेरो स्वभाव कास्कीका जनतालाई राम्रो संग थाहा छ । यहाँको लागि म नयाँ मान्छे होईन । दर्जनौ सस्थामा बसेर काम गरेको अनुभव र जहाँ म बसे ति सस्थाहरुको सामाजिक स्टाटस नै पर्याप्त बिस्वास गर्ने आधारहरु हुन । त्यसो त अन्य उमेदवारहरु जो म संग प्रतिष्पर्धामा हुनुहुन्छ उहाँहरु संग पनि बिकासको स्पष्ट खाँका देखिदैन । मत दिएर जिताएपछि पछुताउनु पर्ने अबस्था आउन नदिने मेरो संकल्पमा जनताले साथ दिन्छन भन्ने अपार बिस्वास छ । ५) प्रश्न ः अन्त्यमा केही भन्नु छ ? अन्त्यमा सबै कास्कीबासी दाजुभाई तथा दिदि बहिनीहरु, आमाबुवा तथा साथीभाईहरुलाई नयाँ संबिधान र्निमाण पछिको संबृद्धिको युगमा प्रबेश गर्न लागेको मुलुकको एउटा असल पहरेदार बन्ने अठोट बोकेको नरेश शंकर पालिखेलाई बिस्वास गरिदिनु हुन अनुरोध छ । आगामी मंसिर २१ गते तपाईहरुले अमुल्य मत बालक चिन्हमा मतदान गरी बिजयी गराउन हार्दिक अपिल पनि गर्न चाहन्छु ।बिस्वासको मत पाउने अधिकार मलाई मात्र छ जस्तो लाग्छ । तपाईको बिस्वासको मत लिएर बिस्वासघात नगर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउन चाहन्छु । धन्यबाद ।